एफएम, टीभी र युट्युबबाट विद्यार्थीलाई पढाउने तयारी | Online Rautahat
| 201 पटक हेरिएको
"शिक्षाविद भन्छन्- कार्टुनिस्टको पनि सहयोग लिन सकिन्छ "
२१ चैत, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रयासमा देश अहिले लकडाउनमा छ । अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै कार्यालय, शैक्षिक संस्थाहरु पनि बन्द छन् । सरकारले घर बाहिर ननिस्किन सबैलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहला भन्ने यकिन छैन ।
वैकल्पिक व्यवस्था के हो ?
अघिल्ला वर्षहरुमा चैत दोस्रो साताभित्र विद्यालयका परीक्षा सकिन्थ्यो र विद्यालयहरु बन्द नै हुन्थ्यो । त्यसबीच उत्तरपुस्तिका जाँच्ने, नतिजा प्रकाशन गर्ने लगायतका तयारी हुन्थे । नतिजा प्रकाशित भइसकेपछि बैशाख १५ गतेसम्म नयाँ भर्ना लिइन्थ्यो । त्यसकारण अहिलेसम्म लकडाउनले शिक्षा क्षेत्रमा खासै प्रभाव परेको मानिएको छैन । लकडाउन कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यकिन नभएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरु पढ्ने-पढाउने विकल्पिक विधि खोज्न लागेका हुन् ।
‘स्थानीय एफएमबाट पढाउन सकिन्छ कि, टेलिभिजन च्यानलहरु, केबल टीभी अपरेटरहरुमार्फत् केही कार्यक्रम जान सक्छ कि । युट्युवमा केही सामग्री राखेर प्रत्यक्ष सवाल जवाफको व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि, स्वअध्ययन सामग्री बनाएर दिन पो सकिन्छ कि भनेर अनेक विकल्पमा हामी छलफलमा छौं । यो अवस्था लम्बियो भने हामी यस्ता विकल्पहरु लागू गर्ने प्रक्रियामा जान्छौं,’ डा. थपलियाले भने ।
कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा पहिले लकडाउनको नीति लिएको चीन सरकारले विद्यार्थीहरुलाई घरमै बसीबसी पढ्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।
शिक्षक कक्षा कोठामा र विद्यार्थीहरु घरमा बसेर पढाउने/पढ्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । विश्वविद्यालयहरुले पनि अनलाइन कक्षा र परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
कार्टुनिस्ट र खुला विश्वविद्यालयको सहयोग लिन सकिन्छ : शिक्षाविद कोइराला
शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइराला पनि लामो समय लकडाउन भएमा भर्चुअल कक्षा अनिवार्य, सहज र व्यापक बनाउनु आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
‘विपत्तिमा शिक्षा दिने अनेकन उपायहरु हुन्छन् । माध्यमिक तहका लागि सफ्टवेरमार्फत पढ्ने-पढाउने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि मिदास, कुल्याब तथा खुला विश्वविद्यालयको अनुभव लिन सकिन्छ,’ डा. कोइरालाले भने, ‘बालविकासको प्याकेज बनाउन कार्टुनिस्टहरूको सहायता लिन सक्छौं । सोलार सिनेमा बनाउने युवाहरूको सहायता लिन सक्छौं ।’
सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रयासमा १० चैतदेखि देशभर लकडाउन गरेको छ । सुरुमा १८ चैतसम्म लकडाउन गरिए पनि त्यो अवधि थपेर अहिले २५ चैतसम्म पुर्‍याइएको छ ।
लकडाउन गर्नुअघि सरकारले चैत ५ गतेभित्र वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गर्न र नयाँ भर्ना नलिन सबै विद्यालयहरु निर्देशन दिएको थियो । साथै एसईई परीक्षा सुरु हुनुभन्दा केही घण्टा अगाडि स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयले केही वर्षयता एसईईका परीक्षार्थीलाई लक्षित गरी नेपाल टेलिभिजन (एनटीभी)बाट कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । एसईई स्थागित भएर लकडाउन जारी रहँदासम्म पनि त्यस्ता कक्षा एनटीभीबाट प्रसारण हुँदै आएका छन् ।